२०७२ लाई फर्केर हेर्दा – Ram Kumar Pariyar
Next नयाँ वर्षको शुभकामना !!!
Previous जुत्ता सिलाउनेको कथा
Current Page Parent अनुभुती
अनुभुती · २०७३ बैशाख १ 0
२०७२ लाई फर्केर हेर्दा
रामकुमार परियार |	२०७३ बैशाख १
समग्रमा २०७२ मेरा निम्ति औषत रह्यो । यद्यपि मुलुकले अपुरणिय क्षति बेहोरेको परिप्रेक्ष्यमा खुसी भने रहेन । एकातिर शुरूवातमै महाविपत्तिले लगभग १० हजारको ज्यान लियो , लाखौंलाई घरबार विहिन बनायो । त्यतिनै संख्यामा अभिभावकविहिन बने भने कैयनको सिउँदो पुछियो । भुकम्प पछिको जटिल परिस्थितिको सामना गर्न सबै राजनीतिक दल र संसार भरका नेपालीहरु एक भए । एकअर्कालाई सहयोग र साथको भावना विकास भयो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुल्यो ।
विभिन्न बहानामा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सिकार बन्नेको संख्या पनि सयौं छ । दर्जनौंले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । वर्षको दोस्रो सातापछी शुरु भएको भुकम्पले नेपालीलाई वर्षैभरी सतायो । तर्साईरह्यो । वर्षको अन्तिम साता सम्म पनि पराकम्पनले छोडेन । बलात्कार , हत्या , महिला हिंसा , जातिय विभेदको घटनामा पनि कमि रहेन । मधेस आन्दोलनको नाउँमा भएको हिंसा र त्यसपछि भारतसंगको साँठगाँठमा लगाइएको नाकाबन्दी ज्यादै कष्टकर रह्यो । राष्ट्रसेवक प्रहरीहरुको बर्बर हत्या हुनु ज्यादै दु:खद रह्यो ।
दाङ देखि मोरङको रंगेलीसम्म दनदनी बल्यो । यी त भए बाहिर आएका मुख्य घटना । यसबाहेक मिडियामा आउन नसकेका घटना कत्ती होलान् त्यो हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौ । नेपाली समाजमा दिन्हुँ प्रायः घट्ने लैंगिक हिंसा , दुर्व्यवहार , छुवाछूत , बोक्सीको आरोपमा गरिने हिंसा जस्ता अधिकांस घटनाहरु मिडियामा आउन पाउँदैनन ।
यद्यपि मुलुकले केही ऐतिहासिक उपलब्धि भने हासिल गर्‍यो । मुख्यत नयाँ संविधानको प्राप्ति नै हाम्रो मुख्य उपलब्धि हो । यो संगै राज्यको सर्वोच्च निकायहरुमा महिलाको उपस्तिथि भयो । जुन पितृसत्तात्मक समाजलाई झापड हान्दै नेपालको ईतिहासमा सुनौलो अक्षरले दर्ज हुन पुग्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले मित्रराष्ट्रहरुसंगको संबन्ध सुदृढ गर्न चालेको कदम स्वागतयोग्य रह्यो । यसबाहेक राष्ट्रियताको पक्षमा उनले खेलेको भुमिका प्रसंनिय रह्यो । भारतिय हस्तक्षेपको विरुद्धमा आम नेपालीहरुले संसारभरबाट विरोध जनाए । सामजिक संजालहरु रंगिए । नेपालीहरुमा हराउँदै गएको राष्ट्रियता भुकम्प र नाकाबन्दीले फर्काईदियो । जसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत राम्रैगरी साथ दिए ।
दु:खद घटना र परिघटना बिच शुरु भएको २०७२ सालले दु:ख संगै सुखको झिनो आभास पनि गरायो । राजनीति रूपमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो ।
विगत जे-जस्तो रहेपनी यो वर्ष नेपालीका निम्ति सुखद रहोस् । तराईमा जारी राजनीति अस्थिरता को अन्त्य होस । नेपालको संविधान सबैको संविधान बनोस । सबैले गर्वकासाथ मेरो संविधान भन्न सक्ने परिस्थिति बनोस । सबै नेपालीको उन्नति , प्रगति होस । सबैलाई शुभकामना !!! बैशाख १ गते
सरकारले सुरु गर्दैछ एक घण्टाका लागि लोग्ने भाडामा लिने सेवा
सहनशिल व्यक्ति अवश्य सफल हुन्छ
Ram Kumar Pariyar © 2022. All Rights Reserved.